Maalinta: Abriil 10, 2019
Bandhigga tikniyoolajiyadda tikniyoolajiyadda waddooyinka ee Eurasia “Intertraffic Istanbul en, oo lagu abaabulay tabarucaadda Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul, ayaa bilaabmay. Xoghayaha guud ee BBB Dr. Hayri Baraçlı wuxuu yiri, bir Istanbul waa goob ay dadku ku badbaadiyaan waqti iyo kharash. [More ...]
Maalgashiga Wadooyinka Tareenka si Lacag ugu Helo Qayb Saadka
Sida laga soo xigtay qaybinta hababka gaadiidka qiimaha ganacsiga shisheeye Turkey ee gaadiidka badda lagu baari ku salaysan boqolleyda xnumx ee, boqolkiiba 62 by wadada, by hawada, waxaan aragnaa in boqolkiiba 23 ah. Muhiimadda gaadiidka tareenka meel kasta oo aan soo sheegnay [More ...]
Eurasia Rail, oo loo yaqaanno midka kaliya ee ugu weyn ee ka dhaca gobolka Eurasia, ayaa waxaa u furay Selim Dursun, oo ah Wasiir Ku-xigeenka Gaadiidka iyo Kaabayaasha. Jamhuuriyadda Turkiga Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, Jamhuuriyadda Turkiga [More ...]
Duqa Magaalada Soyer: Waxaan Keeni doonaa Shabakada Nidaamka Rail Nidaamka Maskax ee 480 Mileage
Madaxweynaha Soyer: Waxaan Masaafada ka baxayn System Network Rail 480: Fair Izmir, xarunta ugu weyn dalka Turkiga ayaa bandhig, 3 dunida ee. Wadada Tareenka Caalamiga ah ee Eurasia, Nidaamka Tareenka Fudud, Kaabayaasha iyo [More ...]
Eurasia Rail 2019 Fair Fair waa bilowday
Xannaan ahaan, iyo adduunka ugu weyn ee 3. Ku guuleystaha 8 ee Dhismaha Wadada Tareenka demiryolu Eurasia Railway, Nidaamka Tareenka Fudud, Kaabayaasha iyo Saadka Saadka [More ...]
Ku haboon: "iibi ah boqolkiiba YHT Turkey Service 40 dadka"
Yurub iyo Aasiya oo keliya, adduunka '3'. 10, carwadii sideedaad ee ugu weyneyd Eurasia Rail-International Railway, Nidaamka Tareenka Fudud, Kaabayaasha iyo Saadka, ayaa laga furay Abril 2019 Xarunta Bandhigga İzmir. Gaadiidka Guud ee TCDD [More ...]
Mashruuca Madaxa Gaadiidka Dadweynaha ee Yavaş
Mansur Yavaş, Duqa Magaalada Ankara ee Magaalo Weyn, wuxuu bilaabay waajibaadkiisa isagoo ballanqaaday inuu maareynta caasimadda ku maareyn doono maan-wadaag. Iyada oo ku saleysan hadalkii Madaxweyne Yava,, Başkent Capital ee dalka, magaalo lagu daydo oo caan ku ah waddanka oo dhan, sumad cusub ayaa beddeli doonta wejiga Caasimadda. [More ...]
Madaxwayne Yavaş si uu mashruuca ugu soo gudbiyo 100 oo loo yaqaan Capital Citizens
Maxay tahay sababta mashruuca Teleferik Kartepe looga joojiyay?
Duqii hore ee Kartepe, Hüseyin Üzülmez, wuxuu sharaxay sababta shaqada loo joojiyay kadib aasaaska mashruuca xariga 10 Diseembar 2018. Üzülmez wuxuu yidhi, shirkad weyn oo shirkadda Valter Elevators ah ayaa qaaday mashruuca Ropeway Line oo leh qaab lagu wareejiyo. [More ...]
3 bilood ee ugu horeysay sanadkan 318 182 kun oo qof u adeegaya Airport Istanbul, halkaas oo tirada dadka ku safraaya marti tegey 23 dadweynaha gobollada dalka Turkiga. Isku soo wada duuboo, 76,5 waxaa lagu dhisay dhul milyan mitir murabac ah, [More ...]
TCDD waxay kaqeybqaatay Jaamacadda Yasar Dayday Logistics
Waaxda Maareynta Maareynta Caalamiga ah ee Jaamacada 12.si 4-5 ee Saadka Saadka sanadlaha ah oo ay soo qabanqaabiyeen Bulshada Saadka ayaa lagu qabtay Abril 2019 xarunta jaamacadda Yaşar. Waxaan hoos xnumx.lojis Days "Mustaqbalka ee Rail Freight ee Turkey abaabulay [More ...]
Waqtiga ansaxnimada waajibka adeegga shacabka waxaa buuxiyay TCDD Taşımacılık A.Ş. 1 Abriil, oo uu saxeexay Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan [More ...]
Fiiri darawalada! Station Bridge 30 Maalin baa lagu xirayaa K.Maras
Kahramanmaraş Dawlada Hoose ee Magaalada, Agaasinka Guud ee Wadooyinka Waaween 5. Agaasime Goboleedka 8 Laga bilaabo Abriil 2019 30 wuxuu shaaca ka qaaday in Buundada Saldhigga loo xiri doono taraafikada midaysan ee dayactirka iyo hagaajinta inta lagu jiro maalinta. Mawduuc [More ...]
RayHaber 10.04.2019 Warbixinta Shirka
Ma jiraan diiwaanada qandaraaska ee taariikhda 10.04.2019 ee nidaamkayaga.